WSZ Series Inter-hihena avo-viscosity marindrano Bead Mill - China Changzhou longxin milina
Io milina io manokana natao ho an'ny mialoha-pielezana sy rongony-pielezana any ambony viscosity fitaovana (offset solika ranomainty). Azo ampiasaina singly ary koa niaraka tamin'ny telo-roller orinasa amin'ny alalan'ny fifandraisana ary koa ny mandeha ho azy tanteraka pamokarana. Izany dia mety tsara ho an'ny fitaovana mamokatra menaka offset ranomainty sy ny fitaovana viscosity avo.
● plc no ampiasaina ho fanaraha-maso, Ary aza manendry izay analogous sary lamba misy (tsy voatery).
● Tapered fikosoham-bary sy ny efi-trano dia manjary efajoro Fanodina manokana natao mba kosohy viscosity fitaovana avo. Ny mandroso Inter-hihena fitaovana mahomby dia ampy hanala ny hafanana niteraka nandritra avo-viscosity nitotoana azy tao amin'ny efi-trano-mitoto vary.
● Mechanical famehezana sy ny famehezana molotra rehetra nafarana avy any Alemaina, izay manampy ny mampitresaka ny mafy bazana ara-nofo izay mitady mandefa avy ao amin'ny efi-mitoto vary amin'ny avo-mitoto viscosity fandidiana.
● Ny andriamby andriamby sivana amin'ny marary mitsika ny 8000 Gauss, izay manala loto vahiny-vy voarakitra ao amin'ny feta ho milled, miantoka vokatra fahadiovana ary koa ny fitaovana fiarovana ny dingana manaraka.
● Volume miova piston karazana efi-trano-mitoto vary miova hakitroky angovo sy ny fanerena hahazo barika pielezana tsara indrindra sy fikitroha valiny.
Previous: WSK Series High-viscosity ahavitan-javatra tsara loatra Bead Mill
Next: WHD Series loatra Bead Mill
Anti-Fipoahana mitsangana Super Bead Mill
Bead Mill Fitotoana Vary Machine
Bead Mill mpanome loko
Ceramic marindrano Bead Mill
malefaka Lad Bead Mill
Full andrakitra marindrano Bead Mill
Viscosity avo mitsangana Bead Mill
marindrano Bead Mill
marindrano vakana Mill
marindrano Large Flow Bead Mill
Nano marindrano Bead Mill
fanafody famonoana bibikely Sc Bead Mill
Mitsangana High Flow Bead Mill
WSV Series mitsangana Inter-hihena Bipyramid Bea ...